Izintlu eziza kuprintwa eziza kwenziwa ukuze zilungelelaniswe - Ukuhlela Tips
Ukuba uziva ukhathazekile kwaye ufuna ukuzilungiselela, unokufumana ukuba ukusebenzisa uluhlu lwezinto ozenzayo ukuzenza kunokuba luncedo kakhulu. Asinguye wonke umntu onemiceli mngeni efanayo yombutho, ke iLoveToKnow idale uluhlu lwezinto eziza kuprintwa, uluhlu lokutshekisha kunye namanye amaxwebhu aluncedo. Khuphela, uprinte kwaye usebenzise ezona ziya kuba luncedo kuwe.
Uluhlu lweeholide kunye nezeMisitho
Fumana ukutsiba kwiiholide nakwiminyhadala ekhethekileyo. Izintlu zigcina uququzelele ngexesha lamaxesha amaninzi enyakeni.
Iingcamango zokuCwangcisa iCloset
Iindlela zokuLungisa iimpahla
Uluhlu lokuHlola lokuCwangciswa kweeholide
Thatha uxinzelelo kubalo olwehlayo ukuya kwiKrisimesi ngolu luhlu luncedo lwezinto eziza kwenziwa kunye noluhlu lokukhangela kwixesha ngalinye.
Cofa kuLuhlu lokuKhangela lokuCwangciswa kweeholide
Isikhokelo sokuLungiselela iKrisimesi
Sebenzisa esi sikhokelo seveki-ngeveki sokucwangcisa ukuhlala ngaphezulu kwemisebenzi yonyaka phakathi kokubonga kunye neKrisimesi
Cofa Isikhokelo sokuLungiselela iKrisimesi
Uluhlu lokuHlola loSapho lokuzalwa
Konwabele ukuqala kwesihloko kwimibhiyozo yosuku lokuzalwa xa usebenzisa esi sikhokelo sokucwangcisa kunye noluhlu lokubonelela.
Cofa kuLuhlu lokuKhangela loMtshato
Uluhlu lokuCwangciswa koCwangciso
Thatha uxinzelelo ekucwangciseni imibhiyozo ekhethekileyo kunye nesi sikhokelo sethuba lamaxesha.
indlela yokuphendula kwisicelo sodliwanondlebe
Cofa kuLuhlu lokuKhangela lokuCwangciswa kweqela
Isikhokelo soCwangciso lweeholide
Yenza umsebenzi olula wokucwangcisela iholide, ukulungiselela uhambo kunye nemisebenzi yokupakisha ngesi sikhokelo siluncedo.
Cofa kwiSikhokelo soCwangciso lweeholide
Imisebenzi yasekhaya yokwenza uLuhlu
Gcina indlu ingenabala ngokulula. Wonke umntu unokunceda ukwenza eyakhe indima naba baququzeleli.
Itshathi ye Chore yasimahla
Sebenzisa le tshathi yokugcwalisa ukunceda ukugcina abantwana bakho- kunye nosapho luphela-luhleliwe.
Cofa kwiTshathi yeChore Free
Uluhlu olwenziwa ngokubanzi
Sebenzisa esi sikhokelo sokugcwalisa siluncedo ukuzigcina ulungelelanisiwe veki nganye.
Cofa kuLuhlu oluQhelekileyo lokwenza
Gcina kunye nemisebenzi yokucoca indlu ngoluhlu olulula ukulandela uluhlu olumiselweyo.
Cofa uLuhlu lokuKhangela
Gcina ixesha nemali kwivenkile yokuthenga ngolu luhlu luzalisayo.
Cofa uludwe lokutya
Imisebenzi yeXesha / yamaXesha athile
Ungavumeli iiprojekthi zamaxesha athile zikunyhekele. Olu luhlu alunakuvumela ukuba ulibale into.
igama kwitayitile hayi kubhengezo lobambiso
Uluhlu lokuHlola lokuCoca iNtwasahlobo
Yenza umsebenzi olula wokucoca intwasahlobo ngonyaka ngoluhlu olubanzi lwemisebenzi yamaxesha onyaka.
Cofa kuLuhlu lokuKhangela lokuCoca iNtwasahlobo
Uluhlu lokuHlolwa kweKhaya
Hlala ngaphezulu kokugqibezela imisebenzi yolondolozo lwendlu ngexesha elililo nolu xwebhu luluncedo.
Cofa kuLuhlu lokuHlolwa kwesondlo seKhaya
Uluhlu lokuHlola lokuLungisa iKhaya
Gcina umkhondo wemihla ethile yokulungiswa kwamakhaya egqityiweyo ngesi sikhokelo siluncedo.
Cofa kuLuhlu lokuKhangela lokuLungisa iKhaya
Uluhlu lokuThengwa kwesipho
Yenza ithuba elikhethekileyo lokuthenga lula ngale fomu iluncedo.
Cofa uLuhlu lokuThengwa kweZipho
Hlala kuhlahlo-lwabiwo mali ngeefom ezenza ukuba imali yakho isebenze. Ezi tshathi kunye noluhlu lokutshekisha ziya kugcina iimali zakho zilungelelanisiwe.
Ifom yokuKhangela uMnikelo
Gcina umkhondo weminikelo oyenzayo unyaka wonke ukuze ube neerekhodi ezilungileyo xa ixesha lerhafu lijikeleza.
Cofa kwiFomu yokuLanda uMrhumo
IFom yokulandelela iindleko
Sebenzisa le fomu inokuprintwa ukuba ufuna indlela elungelelanisiweyo yokugcina umkhondo wenkcitho yakho.
Cofa kwiFomu yokuKhangela iindleko
Umququzeleli weBhili ngenyanga
Qhubeka nemisebenzi yakho yokuhlawula amatyala yenyanga ngendlela ecwangcisiweyo ngale fomu.
Cofa uMququzeleli weBhili yenyanga
Lawula usapho ngaphandle kwengxabano. Gcina wonke umntu kwishedyuli kunye nokwazi ngezi zintlu ziluncedo.
Uluhlu lokujonga umsebenzi wasekhaya
Nceda ulungelelanise umsebenzi wesikolo wabantwana bakho ngoluhlu lokujonga umsebenzi wasekhaya onokusetyenziselwa naliphi na inqanaba lebakala.
Cofa kuLuhlu lokuHlola loMsebenzi weKhaya
Gcwalisa le fomu phambi kokuhlwa kwakho okulandelayo ukuze uqiniseke ukuba umncedisi wakho wokukhathalela abantwana unalo lonke ulwazi olunokufuneka.
Cofa kwiFom yoMgcini womntwana
Ekuseni, emva kwemini kunye noLuhlu lokuHlola
Gcina imisebenzi yosapho ihlelwe ngamaxesha emini ngolu xwebhu luluncedo.
Cofa u-Ekuseni, emva kwemini kunye noLuhlu lokuHlola
Uluhlu lokutshekisha olwahlukileyo
Sebenzisa uluhlu lokutshekisha oluhambayo xa kufuneka kwaye uprinte amaphepha omququzeleli angenanto ukuba ufuna ukwenza uluhlu lwakho.
Yenza utshintsho kwikhaya elitsha libe lula kwaye lihleleke ngakumbi ngokusebenzisa olu xwebhu ukwenza izinto zilungelelaniswe.
Cofa ukuze uhambise uLuhlu lokuKhangela
Phrinta iikopi zeli phepha lomququzeleli ukuze ukwazi ukwenza owakho umcwangcisi wosuku ngesibophelezi esinemingxuma emithathu.
Cofa iphepha loMququzeleli
Ukuba ufuna uncedo lokukhuphela nayiphi na kwezi zinto ziprintiweyo, jonga eziiingcebiso eziluncedo.
Uncedo olungakumbi lweSebe
Nje ukuba uprinte zonke izintlu zokutshekisha ozifunayo, unokufuna ukuzigcina kumcwangcisi wamanqaku ukuze zilungelelaniswe ngokulula.
Sebenzisa iphepha elinemibala eyahlukeneyo ukuprinta iintlobo ezahlukeneyo zokutshekisha. Oku kuya kukunceda ugcine izinto kulula ukuzifumana xa ungxamile.
Gcina imithi kwaye wenze izintlu zokutshekisha ezinokuphinda zisebenze ngokupakisha uluhlu lwakho. Sebenzisa isiphawuli esomileyo ukujonga izinto njengoko uzenza. Xa ugqibile ngoluhlu, sula ucoce kwaye usebenzise kwakhona.
Gcina uluhlu lwakho lokutshekisha apho unokuzibona khona kwaye uziqhelise ukuzisebenzisa rhoqo. Emva kwayo yonke loo nto, ngekhe isebenze ukuba awuyisebenzisi.
Lawula iShedyuli yakho
Khetha ukuba ufuna ukwenza nini izinto emva koko uzenze. Ngale ndlela uya kube ulawula ixesha lakho kunokuba imisebenzi yakho ikulawule uludwe lwezinto eziza kwenziwa onokuzikhuphela apha ziya kukugcina ujolise kwiinjongo zakho. Lungisa ukuba zihlangabezane neemfuno zakho kwaye ugcine izikhumbuzo zilungele izinto ezincinci onokuthi uzilibale ngenye indlela.
Ukukhula Ukuhluma Gourmet Cookware And Accessories Cheerleading Slideshows Ihybrid Vehicles Iifad Diets
Imizekelo Ye Tributes Given At Funerals
yenza ithoni epholileyo yesikhumba
yeyiphi kwezi zilandelayo isibonelelo seentsapho ezandisiweyo?
umngcwabo amanqaku enkosi ngemali
uyicoca njani ishawa yethayile yemabhile
yintoni amabhabhathane umqondiso
Isinxibo Sabafazi Casual Casual
Ski Resort Uhlolo